Amakhodi Eposi API - Ukufinyelela Emininingwane Yomhlaba Wonke Yeposi
Bheka amakhodi eposi, thola wonke amabanga wamakhodi weposi amabanga nokuningi nge-postal code API yethu.
Idatha ebanzi yomhlaba
Kulula ukusebenzisa i-API
I-PostalCodes.app iyithuluzi elikuvumela ukuthi uthole ulwazi ngamakhodi weposi ahlukahlukene emhlabeni jikelele. Ungathola amakhodi eposi ebangeni eliqhele ngamakhilomitha noma ngamamayela, noma uthole imininingwane yekhodi leposi lilonke.
GET Thola amakhodi weposi ebangeni
Ngalesi siphetho esilula sokusebenzisa uzothola uhlu lwamakhodi weposi aphakathi kwebanga elinikeziwe. Isibonelo sesicelo sizobuyisa uhlu lwamakhodi weposi ayingqayizivele, uhlu oluphelele lwamakhodi eposi nemininingwane yekhodi ngayinye yeposi.
I-API yethu yemukela izilinganiso zamabanga ngamakhilomitha (Okuzenzakalelayo) noma ngamamayela.
Ukuze ushintshe isilinganiso sibe ngamakhilomitha kufanele ufake ipharamitha ye- ms
Impendulo izobukeka kanjena:
GET Thola imininingwane yamakhodi eposi
Isibonelo esilandelayo sizobuyisa imininingwane yamakhodi eposi afana nombuzo wosesho.
GET Thola idatha yangokwezifiso
Ungadlulisa amapharamitha angeziwe ukuthola okudingayo kuphela emiphumeleni, vele ungeze fields zamanani esicelweni sakho.
+94 Amazwe asekelwayo
AS (I-American Samoa)
AX (I-Aland Islands)
CR (I-Costa Rica)
CZ (I-Czech Republic)
DO (i-Dominican Republic)
FO (Iziqhingi zaseFaroe)
GB (i-United Kingdom)
GF (I-French Guiana)
GG (UGernsey no-Alderney)
HR (I-Croatia (Hrvatska))
IM (Umuntu (Isle of))
LK (i-Sri Lanka)
MH (I-Marshall Islands)
MP (I-Northern Mariana Islands)